आजको राशिफल : हेर्नुहोस् कस्तो छ तपाईँको आजको भाग्य ? – Pahilo Page
आजको राशिफल : हेर्नुहोस् कस्तो छ तपाईँको आजको भाग्य ?
वि.सं. २०७७ साउन ८ बिहीवार । साउन शुक्लपक्ष । तृतीया, १८ः३० उप्रान्त चतुर्थी ।
८ श्रावण २०७७, बिहीबार १०:३७ 636 पटक हेरिएको
विभिन्न अवसर प्राप्त भए पनि कामको मेसो नमिल्दा अलि पछि परिनेछ । अरूका लागि बुद्धि खर्चनु पर्ला । स्वास्थ्य कमजोर देखिने छ । समयको गतिलाई पछ्याउने प्रयास गर्नुहोला । सम्भावना देखिए पनि उपलब्धि हात पार्न अलि बढी नै श्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कमजोर नतिजा सच्याउन काम दोहोराउनुपर्ला । अवसर र व्यवधानका बीचबाट कर्मयोग अघि बढ्नेछ ।
हतारको निर्णयले अप्ठ्यारो पार्ने हुँदा सजग रहनुपर्ने देखिन्छ । समयमा जुट्न नसक्दा आफ्नो काम रोकिन सक्छ । अरूका लागि उपयोग भइनेछ र बेसुरमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । आवेशको व्यवहार र सानो असमझदारीले आफन्तजन टाढिन सक्छन् । रोकिएका काममा दोहोराएर प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नयाँ मोड लिने छ कर्मयोगले । राम्रो काम गर्दै नाम, दाम र इनाम आर्जन गर्न सकिनेछ । उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा होला । शत्रुहरु परास्त हुनेछन् । प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछाडि पार्नुहुने योग छ । अग्रज र सहयोगी जुट्ने भएकाले सोचेको लाभ उठाउन सकिनेछ । गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल पनि प्राप्त हुनेछ । मिहिनेतले सफलताको उचाइमा पुराउनेछ ।
बुद्धिको माध्यमले लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ । तार्किक क्षमता बढ्नेछ । तर असंयम बोली–व्यवहारले आलोचित भइने सम्भावना छ । मिहिनेत गर्दा विद्या र धन आर्जन हुने छ। सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्ने योग छ । प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । सहयोगीहरूले साथ दिने हुँदा रोकिएका काम पनि सम्पादन हुनेछन् । छिद्र खोतल्नेहरूबाट सजग रहनुहोला ।
आजको दिन रमाइलो रहनेछ । रचनात्मक काम गर्ने समय छ । सहयोगीहरूले राम्रो साथ देलान् । पहिलेको सफलताले पनि थप काम गर्न हौसला प्रदान गर्नेछ । बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुने योग छ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउने देखिन्छ । अवसरका साथ केही चुनौती पनि देखा पर्नेछन् । खानपानको असावधानीले स्वास्थ्यमा कमजोरी देखिन सक्छ ।
आम्दानीका स्रोत कमजोर हुने समय छ । आकस्मिक खर्च बढ्नेछ । पछिका लागि लगानी बढाउनुपर्ने स्थिति आउला । फाइदाका लागि दोहोराएर प्रयत्न गर्नुपर्ला । यात्रा खर्चिलो र कष्टकर बन्न सक्छ । छिमेकमा असमझदारी बढ्ला । भविष्यका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला । सोचेको नतिजा तत्काल प्राप्त नहुन सक्छ ।
सोचेको फाइदा नहुन सक्छ । आम्दानीका विभिन्न स्रोत देखिएलान् । लगानीतर्फ लागत बढ्नेछ । कामको राम्रै मूल्यांकन भए पनि प्रतिफल हात पार्न केही समय लाग्नेछ । आफ्नो लाभांशमाथि अरूले दाबी–विरोध गर्न सक्छन् । ईष्र्या गर्नेहरूबाट सजग रहँदा फाइदा होला । अरूको मुख ताक्ने बानीले पछि परिनेछ । भविष्यका लागि गरिएको लगानीले अवश्यै फाइदा दिनेछ ।
कर्मक्षेत्रमा गरिएको साधना सिद्ध हुनेछ । नयाँ कामले नाम र दाम दिलाउला । मिहिनेतले सजिलै लक्ष्यमा पुराउला । प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ । विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् । दिगो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त होला । पदासीन व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ । व्यवसायमा पनि फाइदै हुनेछ । कर्मयोगले मानसम्मान समेत दिलाउनेछ ।
पहिलेका कमजोरी बाहिर आउनाले प्रतिष्ठामा समस्या पर्न सक्छ । चुनौतीभित्र अवसर खोज्ने समय छ । स्वास्थ्य कमजोर रहनाले सोचेको उपलब्धि तत्काल नपाइएला । आफ्ना सूचना बाहिरिने समय रहेकाले गोपनीयतामा विशेष ध्यान पुराउनुहोला । सामाजिक कामको जिम्मेवारी प्राप्त हुने समय छ । नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोराउनुपर्ने हुनसक्छ ।
अस्वस्थताले कमजोरीको अनुभूति हुनेछ । परिस्थितिको चक्रमा अलमलिनुपर्दा काम बन्न समय लाग्नेछ । चुनौतीपूर्ण कामको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ला । आकस्मिक समस्याले शरीरमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ । चिताएको काम बिग्रनाले निराशा छाउनेछ । गोपनीयता बाहिरिनाले पनि समस्यामा परिनेछ । फजुल खर्च बढ्ने र लेनदेनमा पनि नोक्सान पुग्ने देखिन्छ ।
अर्थ अभावले सताउन सक्छ । मानसम्मान प्राप्त भए पनि आतिथ्य खर्चिलो बन्नेछ । लोकाचारका लागि भोगविलासका वस्तु जुटाउनुपर्ने देखिन्छ । यात्राको प्रक्रियाले खर्च बढाउन सक्छ । आफन्तबीच आत्मीयतामा कमी आउने देखिन्छ । वादविवादले घरगृहस्थीमा समस्या निम्त्याउन सक्छ । नयाँ परिवेशमा पुगिए पनि मनमा दुविधा कायम रहनेछ । काममा अधिक खर्च हुनेछ ।
ईष्र्या गर्नेहरू स्वयं पछि पर्नेछन् । चुनौती अँगाल्नुपरे पनि आँटले लक्ष्यमा पुराउनेछ । कर्मयोगले भविष्यको बाटो समाउनेछ । मिहिनेतले काममा सफलता दिलाउनेछ । समस्या पन्छाएर अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ । दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ । रोग तथा शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ । प्रतिस्पर्धाको दौडमा समेत जित हासिल हुनेछ ।